Manavaka ny fampirimanao amin'ny KDE amin'ny fanomezana azy loko hafa | Avy amin'ny Linux
Fantatro ny olona mandamina ny fotoanany amin'ny alàlan'ny fampandrenesana amin'ny Facebook, ny hafa (tafiditra ao amiko) dia tarihin'ny mailaka, ny hafa aza mampiasa WhatsApp, mamelabelatra hafatra na zavatra toy izany ... hatramin'ny fametrahana azy Whatsapp amin'ny solosaina ary tsy amin'ny finday avo lenta fotsiny, ny hafa amin'ny alimanaka (efa noresahintsika KOrganizer + Kalandrie Google), sns.
1 Manava ny lokanao amin'ny loko
2 Ahoana ny fomba hanavahana ny lahatahiry amin'ny loko
Manava ny lokanao amin'ny loko
Misy ireo mankafy manana birao tsotra, misy ireo izay tsy te-hitondra azy ireo amin'ny dock sy widget hafa izay manampy azy ireo hitantana ny fotoanany, ny lisitry ny fiantsenana, ny fampahatsiahivana sns.
Ary koa, misy ireo izay namorona fomba iray handrafetana ny asany, handrindrana vaovao misy loko vitsivitsy, toy ny nataon'ny sasany tamintsika taona maro lasa izay miaraka amin'ireo takelaka miloko nopetahany takelaka, vata fampangatsiahana, sns.
Amin'ny alàlan'ny plugin na addon ao KDE afaka manao toy izany koa isika. Tsy vitan'ny hoe manana fampahalalana ao amin'ireo tonian-dahatsoratra na fanonta an-tsoratra efa misy, fa ankehitriny dia afaka manavaka ny lahatahiry amin'ny loko ihany koa isika.
Ahoana ny fomba hanavahana ny lahatahiry amin'ny loko
Ho an'ity dia tsy maintsy ampidinintsika Dolphin Folder Colour, Ity ny rohy:
Sintomy ny loko Dolphin Folder
Vantany vao alaina isika dia manohy mamaha azy io, dia hamorona folder antsoina hoe: dolphin-folder-color-1.4
Ampidirinay amin'ny alàlan'ny terminal ilay fampirimana (na amin'ny browser browser ary kitiho ny [F4] hampiakatra ny terminal) ary manatanteraka ny fisie install.sh
Tsy fantatrao ve fa niaraka tamin'ny F4 ilay terminal? … Te hahafantatra ny fomba fanokafana ny terminal ve ianao amin'ny fakan-tsary hafa? … Tsidiho ity rohy ity: Asehoy / sokafy ny terminal eo amin'ny fitehirizam-bokinao
Hanontany anay izy hoe mpampiasa iza no tianay hametrahana an'ity safidy ity, ary dia izay.
Vantany vao tafapetraka dia manidy sy manokatra indray izahay Dolphin, ny mpizaha rakitra.
Rehefa tsindrio havanana eo amin'ny fampirimana iray isika dia hanana menio antsoina hoe Color:
Ary voila, azontsika atao ny miloko ny lahatahiry rehetra tadiavintsika ... mandra-panovantsika ny avana ho avana 😀
Raha ny tenako manokana dia tsy manana afa-tsy fampirimana 2 misy loko samihafa avy amin'ny toerana misy anao aho, ilay fampirimana miasa ary ilay fampirimana Temp, tsy mila zavatra bebe kokoa aho.
Ny mpanoratra an'ity dia autoban, ity ny rohy mankany KDE-Look.org
Marina ny manazava fa raha tsy manana folder mitovy amin'ny loko samihafa ny fonosana kisary, dia tsy handeha izany. Izany hoe, miasa amin'ny fomba tsotra io, rehefa misafidy loko hafa tadiavina ny fampirimana miaraka amin'ny loko voatondro, raha tsy misy ny fonosantsika, dia manana olana isika. Efa nanandrana fonosana kisary marobe aho ary tsy nisy olana, saingy antsipirihany tokony horaisina izany
Ireto misy lahatsoratra misimisy momba an'i Dolphin:
Ny rakitra ISO Mount avy amin'ny Dolphin
Kitapo hitsin-dàlana ho an'ny Dolphin
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Manavaka ny fampirimanao amin'ny KDE amin'ny fanomezana azy loko hafa
Tsara, toa OS X izany
Tena tsara. Misaotra amin'ny fampidirana. Salama.
Fanampiny tena tsara ary tena ilaina amin'ny fitadiavana lahatahiry indray mipy maso. Fa hitako fa ireo lahatahiry tsy manana topi-maso rakitra fotsiny no miloko. Ohatra: Ny folder izay misy sary dia aseho mialoha eo amin'ny kisary ny sary kely. Eny, ao amin'ireo lahatahiry ireo dia tsy raisina ny loko ary manohy ny loko Dolphin default. Tsy haiko raha sendra olon-kafa izany zavatra izany.
Izany dia tsy maintsy ho avy amin'ny cache cache ..
Fanitarana tena tsara 🙂
Eto ianao manana iray hafa ho an'i Nautilus, Nemo ary Caja:
Efa nisy zavatra sahala amin'izany, tadidiko fa na ny kisary oxygen aza dia mitondra an'io maody io fa resaka fandefasana azy amin'ny menio Dolphin. Mety ve izany miaraka amin'ny fonosan'ny kisary sa fenitra tsy maninona izay napetrakao. Amin'ny tranga EOS sy Mint dia miasa irery izy io.
Whatsapp ho an'ny pc dia hoy izy:
Valio ny whatsapp amin'ny pc